Ungayikhetha kanjani umshini wokusika ingilazi?
1. Ukukhethwa: ngokuya ngosayizi wangempela wokusika webhizinisi uqobo, khetha okulungele wena ngokwakho, imodeli yomshini wengilazi2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, imodeli 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, imodeli3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm Ukucabangela isisekelo sefektri ...
Ungayikhetha kanjani umshini wokucheba wamatshe angama-45 degree?
Ngokuthandwa kwetshe elicwengekileyo, imishini yokucubungula insimbi eyenziwe ngamatshe nayo yangena kancane kancane emakethe, ukuncoma kuwe imishini yokugaya yensimbi esetshenziswayo, ama-degree angama-45 uma kuqhathaniswa ne-saw blade cutting edge ...
Liyini itshe le-sintered? Yindawo eyenziwe ngomuntu eyenziwe nge-ultra compact eyenzelwe ukuqina. Sekuyiminyaka embalwa manje, ngakho-ke uma ungakakhi ngayo, kungenzeka ube maduzane. Noma iyiphi indlela, uzofuna ukufunda ukusika itshe le-sintered ngendlela efanele ...